Local company questions sale of BP-Shell unit – Nehanda Radio
Local company questions sale of BP-Shell unit
On Oct 26, 2010 222
The Indigenous Petroleum Group of Zimbabwe challenged Jersey-based Masawara Plc’s bid to buy BP and Shell Marketing Services (Private) Ltd., a unit owned by BP Plc and Royal Dutch Shell Plc, Newsday said, citing the company’s secretary-general, Crosby Mashiri.
Mashiri wrote to Zimbabwe’s National Indigenization and Empowerment Board to ask why black-owned companies now leasing BP and Shell assets weren’t given the chance to bid ahead of Masawara, the Harare-based daily newspaper said on its website. Masawara’s offer to acquire BPSMS through its Zimbabwe unit, FMI Zimbabwe, was agreed on “in principle” Oct. 12, Newsday said.
Harare-based businessman Shingai Mutasa owns 63.4 percent of Masawara, which is listed on London’s AIM market. The company raised $25 million in August to fund acquisitions in Zimbabwe, Newsday said.
Masawara’s bid to acquire BP and Shell’s assets in Zimbabwe, which include 73 fuel retail outlets, six depots and a defunct lubricants plant, was the second attempt to buy the company.
Jan 8, 2018 21,929
May 24, 2015 136,687
Jul 29, 2011 259
Sep 11, 2010 286
Zimbabwe’s government blocked a March 25 bid by Kenya’s KenolKobil Ltd. because the country’s laws require all businesses valued at over $500,000 to have a 51 percent black Zimbabwean shareholding. Bloomberg
BP and Shell Marketing Services (Private) LtdCrosby MashiriIndigenous Petroleum Group of ZimbabweMasawaraNational Indigenization and Empowerment BoardShingai Mutasa
No deportation until there is change: MDC UK
Could X Factor reject Gamu be X-mas No 1
Mar 8, 2021 84,068
Mar 8, 2021 35,325
Mar 8, 2021 28,699
Mar 8, 2021 38,151
Mar 8, 2021 65,960
Mar 7, 2021 46,397